‘लायन्स सेवामुलक र लिडरशीप गर्ने संस्था हो’ – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, ४ बैशाख २०७४, सोमबार १५:५१
सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले लायन्स क्लब अफ विराटनगर फ्यूजन हालै स्थापना भएको छ । क्लबको अध्यक्ष टि.पी. आचार्य हुन । शनिबार विराटनगरमा आचार्यसहित पदाधिकारीको पदभार ग्रहणसमेत भएको छ । नवनिर्वाचित क्लबका अध्यक्ष आचार्य विराटनगर जेसिजको पूर्व अध्यक्ष, रोटरी क्लब अफ विराटनगरका सदस्य तथा आचार्य कल्याण परिषदको सचिबसमेत रहेका छन् । उनीसँग गरेको कुराकानीको सारः
विराटनगरमा लायन्स क्लबहरु धेरै छन् । फ्यूजन क्लब फेरि किन ?
सामाजिक काय गर्ने उद्देश्यले विशुद्ध सामाजिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरु आवद्ध भएको क्लब हो, यो । विराटनगरको बरगाछी वरिपरी रहेका व्यक्तिहरु यस संस्थामा आवद्ध छन् । खाली रहेको समयको सदुपयोग गरी सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यले लायन्स क्लब अफ फ्यूजन नाम राखी क्लब स्थापना गरेका हौं ।
हाम्रो क्लबमा २६ जनाको नयाँ कार्यसमिति रहेको छ । यस क्लबमा व्यापारी, स्कूलका प्रिन्सिपल, चिकित्सक, बैंकर आदी क्षेत्रमा व्यक्तिहरु आवद्ध गरेका छौं । आवद्ध भएका साथीहरु समाजको लागि केही गर्न इच्छुक साथीहरु रहेको हुनाले हाम्रो कार्यकाल सामाजिक गतिविधिहरुमा केन्द्रित हुनेछ ।
एक वर्षको लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । तपाईको कार्यकालमा के–के काम गर्नु हुन्छ ?
सेवामूलक र ग्रामिण तथा दुर्गम भेगको आर्थिक रुपमा विपन्न सामुदायको क्षेत्रमा गएर सामाजिक कार्यहरु गर्नेछौं । आर्थिक रुपमा विपन्न सामुदायमा मानिसहरु स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा रहेकोले उनीहरुको लागि स्वास्थ्य शिविर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । अबको एक साताभित्र धनकुटामा नाम्जेमा रहेको एक सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको लागि वृहत निःशुल्क आँखा शिविर राखेका छौं । शिविरको लागि प्राविधिक टोली विराट आँखा अस्पतालले दिनेछ । जसबाट विभिन्न सामुदायका मानिसले लाभ लिनेछन् ।
शिविरमा आँखाका बिशेषज्ञ चिकित्सवहरुबाट सेवा प्रदान हुनेछ । त्यस्तै यूवालाई मोटिभेसन गर्ने विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेछौं । दुव्र्यसनमा फसेका यूवालाई सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गर्नेछौं । त्यस्तै सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्नको लागि ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हुनेछ ।
त्यस्तै विराटनगरको पानीट्याङ्कीदेखि भट्टाचोकसम्मको सडकको बिचको भागमा वृक्षरोपण गरेका छौं । अब क्षेत्रको ठाउँमा रोपिएको विरुवाहरु हाम्रो क्लबले संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको छ । उक्त कार्यको लागि विराटनगर उपमहानगरपालिका र एजेलिया बोर्डिङ स्कूलले पनि सहकार्य गरेको छ ।त्यस क्षेत्रमा सोलार बत्ती जडान गरी झिलिमिलि पार्ने योजना पनि रहेको छ ।
लायन्स क्लबमा धनाड्यहरुको समय कटाउने संस्था हो भन्ने सुनिन्छ । खासमा के हो ?
यस कुरामा म असमत छुँ । यो आरोप मात्र हो । यस संस्थामा आवद्ध हुने व्यक्ति समाजको लागि केही गर्छु भन्ने इच्छाशक्ति भएका व्यक्ति सहभागि हुनेछन् । यस संस्थामा आवद्ध हुने विशुद्ध समाजसेवा गर्ने व्यक्ति र लिडरशीप गर्ने संस्था लायन्स हो । यस्तो व्यक्ति मात्र लायन हुन सक्छन् ।
तपाई विभिन्न संघसंस्थामा पनि आवद्ध रहनुभएको छ । कसरी समयको व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको इच्छा हो । कुनैपनि सामाजिक कार्यमा लाग्ने व्यक्तिलाई समयले छेक्दैन । म व्यापारमा पनि आवद्ध भएको हुनाले समय तालिमका बनाएको छुँ । एक समय व्यापारमा समय दिने र बाँकी रहेको समयमा सामाजिक कार्यमा खर्चिनेछु । सबैभन्दा पहिले भनेको इच्छा भयो भने समयको व्यवस्थापन आफै हुँदोरहेछ ।
आफू संस्थापक अध्यक्ष भएको हुनाले यस संस्थालाई मजदुत बनाउँनेछु । हाम्रो क्बलको एउटै उद्देश्यललाई आवलम्बन गरेको छ । क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटीलाई विश्वास गरेर कामहरु अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं । वर्षभरीमा २६ जनाको कार्यसमितिमा २६ वटा कार्यक्रम गर्ने योजना छ । एक जना समितिको लागि एउटा कार्यक्रम रहेको छ । थोरै कार्यक्रम गर्नेछौं । तर, पनि गुणस्तरीय कार्यक्रम गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ ।
सरकारको ढुलमुले रवैया र शिक्षा नीति प्रति मेरो असन्तुष्टि
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार १९:३२
मुनाफा रहित विराट क्याम्पसमा नयाँ शिपमुलक कार्यक्रम ल्याएका छौ : आरसी कोइराला
२८ श्रावण २०७५, सोमबार २०:५५
निजी विद्यालय स्वायत्त हुनु पर्छ-पुरी
१७ माघ २०७३, सोमबार २२:०९
विराटनगरलाई समृद्धिको सहर राजधानिको सहर बनाउने सपना– मेयर पराजुली
२८ असार २०७५, बिहीबार २१:२५
२३ माघ २०७५, बुधबार १६:०५